Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Lalàna
Pejy 2 amin_ny 204
Tantara mikasika ny Lalàna
Voampanga ho mamoaka sary mamoafady ilay mpivarotra niakanjo ‘manaitaitra’ tao amin'ny Facebook tany Kambodza
Azia Atsinanana18 Marsa 2020
"Anisan'ny antony fototra amin'ny herisetra ary tsy manafoana izany ka tokony holavina ny fanasaziana ny vehivavy amin'ny safidiny amin'ny fitafiany."
Faly ny vondrona media ao Filipina fa nilaza ny hiaro ny fahalalahan-gazety ny orinasan-teknolojia voampanga ho nanao fanafihana an-tserasera
Azia Atsinanana14 Marsa 2020
"Fandresena kely izao ao amin'ny tolona ataonay ho amin'ny fahalalahan'ny gazety. Miantso ny orinasan-teknolojia rehetra izahay tsy hamela ny fotodrafitrasany ho ampiasain'ny fahavalon'ny fahamarinana."
Fanakatonana ny Aterineto taona 2019: Mbola mijanona ho lohalaharana amin'ny lisitr'ireo ratsy indrindra i India
Azia Atsimo11 Marsa 2020
Tamin'ny taona 2019, tao India fotsiny no nahitana ny fanapatapahana ny fidirana amin'ny aterineto in-121, hoy ny tatitra vaovao avy amin'ny Access Now.
Mitombo noho ny fanaovana tatitry ny ady any avaratr'i Mozambika ny fanafihana ireo mpanao gazety
Afrika Mainty07 Marsa 2020
There has been an alarming increase in the number of threats made against journalists who are covering the armed attacks in the northern province of Cabo Delgado. Mampiahiahy ny fitomboan'ny fanafihana atao amin'ny mpanao gazety izay mitatitra ny fanafihana mitam-piadiana any amin'ny faritany avaratr'i Cabo Delgado.
Karaiba06 Marsa 2020
Fiainana an-jorombala: Ny vahoaka Lyuli ao Ozbekistan
Azia Afovoany sy Kaokazy05 Marsa 2020
Nilaza i Aleksandr Barkovsky, mpaka sart niasa niaraka tamin'ny vondrom-piaraha-monina, fa tsy mahalala na inona na inona momba ireo Lyuli mpifanolo-bodirindrina aminy ny Ozbeka.
Azia Atsinanana20 Febroary 2020
Loza mitatao ho an'ny taokanto fahagola ao Punjab, India ny sondrobidin'entana sy ny haba lafo loatra
Azia Atsimo18 Febroary 2020
Noho ny fiakaran'ny vidin'ny hazo avy ao Shisham, mitontongana ny lazan'ny fanaovana taozavatra vita sokitra sy raritakelaka avy amin'ny hazo ao Hoshiarpur any Punjab, India